सीमामा भारतीय फौजको घेराबन्दी	| नेपाल इटाली डट कम
सीमामा भारतीय फौजको घेराबन्दी
August 5, 2009 — nepalitaly
पशुपतिनगरमा भारतले ढाँट्यो
२७ बटालियन फौज तैनाथ
सरकारले नेपाल–भारत सीमामा हजारौं भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेकाले मुलुकको राष्ट्रियतामा खतरा उत्पन्न भइरहेको गोप्य रिपोर्ट तयार पारेको छ।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको गृहमन्त्रालयले तयार पारेको रिपोर्टमा दक्षिण सीमामा भारतले २७ बटालियन सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरेको उल्लेख छ। सीमा विवादले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रालयले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार मुलुकको सार्वभौमसत्ता खतरापूर्ण अवस्थामा रहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।
गृहमन्त्रालयले सीमा सम्बन्धी रिपोर्ट कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका परराष्ट्रका उच्च अधिकारीले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेका छन्। परराष्ट्र स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार रिपोर्टमा सीमामा सुरक्षाफौज तैनाथीका विषयमा भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ। शान्ति सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी बोकेको गृहमन्त्रालयले सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिलाई लिएर गम्भीर रिपोर्ट तयार पारेको इतिहासमै पहिलो पटक हो। भारतले केही वर्षदेखि सीमा अपराध नियन्त्रणको आवरणमा नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमै सुरक्षा बल तैनाथ गर्दै आएको भए पनि नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेको थिएन। यो रिपोर्टको तयारीपछि गृह प्रशासन भारतबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमणका विषयमा केही हदसम्म गम्भीर भएको विश्लेषण गरिएको छ।
रिपोर्टअनुसार भारतले सीमा क्षेत्रका नेपाली भूमि मिचेर समेत सुरक्षा बल तैनाथ गरेको गम्भीर सत्य उजागर गरेको छ। धेरै ठाउँमा त भारतले सीमाको दशगजा क्षेत्रमा सुरक्षा बलको म्याप खडा गरेको छ। दशगजामा रहेको भारतीय सीमा सुरक्षा बलले बेला–बेलामा नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर बितण्डा मच्चाउँदै आएका छन्। केही समयअघि दाङको कोइलावासमा भारतीय सीमा सुरक्षाबलले नेपालीमाथि दमन गरेको थियो। भारतीय फौजको बितण्डाबाट पशुपतिनगर सबैभन्दा धेरै पीडित हुँदै आएको छ। बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर सुस्तामालगायतका स्थानमा भारतीय फौजले नेपालीलाई पीडा दिँदै आएको छ।
सरकारी अध्ययनमा भारतले नेपाली सीमामा २७ बटालियन अर्थात् २५ हजार फौज तैनाथ गरेको भए पनि सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमामा ४५ हजार फौज तैनाथ रहेको दाबी गरेका छन्। ‘एक किलोमिटरको दूरीमा २५ जनाका दरले सीमामा भारतीय फौज तैनाथ छन्।’ सीमाविद् श्रेष्ठले सोमबार दृष्टिसँग भने– भारतले संख्या बढाएर अब ६० हजार पुर्यााउँदैछ। पूर्वको पाँचथरदेखि पश्चिमको कालापानीसम्म सीमा सुरक्षाबल र इन्डो टिवेटन बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सका नाममा भारतले अर्धसैन्य बल स्थापना गरेको हो। विश्लेषकहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप सीमा कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय सेना तैनाथ गर्न नमिल्ने भएकाले सैन्य तालिम प्राप्त अर्धसैन्य बल खडा गरिएको हो। नेपालमा माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा रहेका बेला त्यसलाई निगरानी गर्ने नाममा भारतले सीमामा सुरक्षा फौज तैनाथी सुरु गरेको थियो। भारतले पछिल्ला दिनमा सीमामा सुरक्षाफौजको संख्या बढाउँदै लगे पनि तराईमा अपराधका घटनामा कमी आएको छैन। तराईमा हतियारधारी समूहलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सहयोग गरिरहेको छ।
नेपालतर्फ भने १८ जिल्लामा सीमा सुरक्षाका लागि परिचालन गरिँदै आएकोमा यस वर्षदेखि २० जिल्लामा पुर्याटइएको छ। हाल प्रत्येक जिल्लामा दुई सय ३८ जनाका दरले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएकोमा प्रहरीमा थप्ने भनिएको नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएपछि पाँच सय पुर्याकउने लक्ष्य लिइएको छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको सीमा सुरक्षा बलको पहुँच दशगजा क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन। गृहमन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका सीमा स्तम्भको विवरण तयार पार्न तथा रेखदेख गर्न नयाँ जिम्मेवारीसमेत सशस्त्र प्रहरीलाई सुम्पिएको छ। उता भारतले विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र कञ्चनपुरको बनवासामा सिसीटिभी फिट गरेर सीमामा कडाइ गरिरहेको छ।
प्रतिवेदनमा भारतले नेपाली सीमा मिचेको विस्तृत विवरणसमेत उल्लेख गरी भारतसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन गृहले परराष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भारतीय राजदूत राकेश सुदले नेपाल सरकारका गृह सचिवलाई पत्र लेखी भारतले नेपाली भूमि नमिचेको दाबी गरेका छन्। भारतीय राजदूतको पत्रमा सन् २००९ जुन १५ मा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले इलामको पशुपतिनगरमा सीमा निरीक्षण गरेको र भारतीय समकक्षीसँग भेटघाट समेत गरी भारतले नेपाली भूमि नमिचेको बताएको दाबी गरेका छन्। तर, पशुपतिनगर पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल सरकारका अधिकारीले कुनै पनि भारतीय अधिकारीलाई नभेटेको र पशुपतिनगर क्षेत्रमा भारतले सीमा मिचेको किटानीसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि गृह र परराष्ट्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भेट्दै नभेटेको विषय उठाएर भारतीय राजदूतले पत्राचार गरेको घटनाले भारतले सीमा समस्यामा कतिसम्म तल झरेर व्यवहार गर्दै आएको रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ। गृहले परराष्ट्रमा पठाएको प्रतिवेदनमा इलामको छब्बिसे, पशुपतिनगर र हिले भन्ज्याङमा भारतले नेपाली सीमा मिचेको प्रमाणसहित किटान गरिएको छ। हिले भन्ज्याङमा भारतीय सुरक्षाफौज एसएसबीको कार्यालय दशगजाभित्र रहेको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ। हालै विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता मदनकुमार भट्टराईले भने यसबारेमा अनभिज्ञता जनाएका छन्। परराष्ट्रले यसबारेमा अध्ययन नगरेको भट्टराईले बताए। भारतीय राजदूतले पत्राचार गरेर हुँदै नभएको घटना जोडेर नेपालको तेजोबध गर्दासमेत सरकारले यसमा गम्भीर प्रतिक्रिया जनाउन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को बैठक छोडेर भारतीय राजदूतलाई भेट्न जाने सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री भएको अवस्थामा नेपालले यो विषय उठाउनेमा परराष्ट्रकै कर्मचारीले शंका व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल र भारतबीच सीमामा सैन्य फोर्स राख्ने विषयमा कुनै सहमति भएको छैन। नेपाल र चीतबीच सन् १९६० मा दुवै देशतर्फ २०/२० किलोमिटर क्षेत्रमा सैन्य बल नराख्ने सम्झौता भएको छ। तर, भारतसँग कुनै सम्झौता नहुँदा सेमी मिल्ट्री फोर्स राखेर उसले नेपाललाई घेराबन्दी गरिरहेको छ।
One Response to “सीमामा भारतीय फौजको घेराबन्दी”
ho tyehi ta vaneko yo sarkaar ke gardai cchha? aau nepali haru sabai yekjoot vayer yesko birodh garam.
« विशेष सुरक्षा योजनापछि तराईमा युद्धको त्रास
भारतको साथ बिना नै सरकार ढाल्दिने योजना »